प्रचण्डले गिरिजा खेलाए कि गिरिजाले प्रचण्ड ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
प्रचण्डले गिरिजा खेलाए कि गिरिजाले प्रचण्ड ?
२०७१ फाल्गुन १, शुक्रबार ०५:०९ गते
आजकल केही कांग्रेसी नेताहरुले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव ल्याएका होइनन् भनेर उनको बचाउ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसबेला धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धि भनेर गौरव गर्दै त्यसको सम्पूर्ण जस गिरिजालाई दिनेहरु नै अहिले निरपेक्षता जनस्तरबाट अस्वीकृत भएको सन्दर्भमा भने त्यसको अपजस गिरिजालाई दिन चाहँदैनन् ।
हाल धर्मनिरपेक्षतालाई माओवादीले प्रमुखताका साथ उठाएता पनि वास्तवमा धर्मनिरपेक्षताको प्रस्तावक कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने समर्थकचाहिँ तत्कालीन सात दलका नेता थिए । पुनस्र्थापित संसद्मा माओवादी थिएन । पछिमात्र पुनस्र्थापित संसद्लाई विघटन गरेर २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरिएको हो, र सोही दिन माओवादीका ८३ जना नेताहरुलाई सांसद्का रुपमा मनोनयन गरी नयाँ (अन्तरिम) संसद् जन्माइएको थियो । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको २०६३ जेठ ४ गते हो, तर माओवादी संसद्मा प्रवेश गरेको चाहिँ २०६३ माघ १ गते हो । माओवादी धर्मनिरपेक्षताको न प्रस्तावक थियो, न समर्थक । उसले बाहिर बसेर गिरिजालाई खेलाइरहेको थियो । तर, गिरिजाले भने माओवादीलाई आफूले खेलाएको ठानिरहेका थिए ।
२०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुनस्र्थापित संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई आफू अस्वस्थ भएको भन्दै सभामुखलाई पढेर सुनाउन अनुरोध गरेपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले पढेर सुनाएका थिए । नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, जनमोर्चा नेपालका चित्रबहादुर केसी र परी थापा, नेपाल सद्भावना पार्टीका यज्ञजीत शाह, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) का महामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले समर्थन गरेका थिए ।
निष्पक्ष भएर हेर्दा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रुपमा देख्न चाहनेहरुले गिरिजालाई प्रधान खलनायक देख्न सक्नुपर्दछ । धर्र्मिनरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा देख्न चाहनेहरुले उनलाई नायक देख्न सक्नुपर्दछ ।
२०६३ जेठ ४ गते पुनस्र्थापित संसद्को बैठकमा कोइरालाले प्रस्तुत गरी पारित भएको प्रस्ताव यस्तो थियो ः
प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र– २०६३
१ व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा ः
नेपालको व्यवस्थापिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिने छ । कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान् र अन्त्य देहायबमोजिम हुनेछ ।
क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आह्वान् हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिने छ ।
ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइँ सदस्यहरूले सभामुखसमक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नु पर्नेछ ।
नेपाल राज्यको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरु प्रतिनिधिसभाको मातहतमा हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली स्वयम् बनाई लागू गर्नेछ ।
कार्यकारिणीका सम्बन्धमा ः
नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
प्रमको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिने छ ।
सेनाका सम्बन्धमा ः
‘शाही नेपाली सेना’को नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाली सेना’ गरिने छ ।
सेना परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नेपाली सेनाको गठन नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । सोको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
सेनाको परमाधिपतिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने छ ।
ड्ड ४ राजपरिषद्का सम्बन्धमा ः
राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
५ राजदरबार सम्बन्धमा ः
राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहने छ ।
श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।
श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुनबमोजिम कर लाग्नेछ ।
श्री ५ बाट संविधान र कानुनविपरित गरे भएका कामहरुका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छ ।
श्री ५ को सरकार’लाई अब उप्रान्त ‘नेपाल सरकार’ भनिने छ ।
विद्यमान राजप्रसाद सेवाको व्यवस्था खारेज गरी राजदरबारमा निजामती सेवाबाट आवश्यक कर्मचारीहरु खटाइने छ ।
राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
ड्ड ६ विविध ः
क) प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा तोकिएका सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरुले यो घोषणापत्रप्रति आस्था प्रकट गरी प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको समय र ढाँचामा शपथ लिनेछन । शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन ्।
ख) यस घोषणासँग बाझिएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्य कानुनका व्यवस्थाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।
ग) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा, व्यवधान प्रतिनिधिसभा स्वयम्ले निर्णय गरी अनुकूल गर्न सक्ने छ ।
घ) वैकल्पिक राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिने छ ।
ङ) नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ ।
यस घोषणालाई म्याग्नाकार्टा (बेलायतको व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वतन्त्रताको बडापत्र) भन्दै गिरिजाले यसका विरूद्ध काम गर्नेले दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने समेत बताएका थिए । तर, राजसंस्थाको सन्दर्भमा यही घोषणाले जुन व्यवस्था गरेको थियो, त्यसको मर्मविपरीत गई उनी आफैँले भनेको म्याग्नाकार्टालाई कोइरालाले तोडे । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको प्रस्ताव कोइरालाले नै ल्याएका थिए । अरुले तोडे दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने बताउने गिरिजाले आफूले तोड्नुचाहिँ सही हो वा गलत ? त्यो छुट्याउने जिम्मा तपाईं पाठकलाई ।
आफैँले भनेको म्याग्नाकार्टाको विरूद्ध कोइरालाले गरेका काम यिनै हुन् । गिरिजा नायक हुन् वा खलनायक ? छुट्याउने जिम्मा फेरि पनि पाठकहरुकै ।
समस्या र स्वार्थ आआफ्नै
राजनीतिका कुरा र हामी
मिसावटको अवस्था र सजगता